Inkatha isola uMalema ngokukhomba iSihlalo ngomunwe – Ubukhosi
Home/ Izindaba/Inkatha isola uMalema ngokukhomba iSihlalo ngomunwe
Inkatha isola uMalema ngokukhomba iSihlalo ngomunwe
IZINKULUMO zakamuva zomholi wenhlangano i-Economic Freedom Fighters (EFF) uMnu uJulius Malema, mayelana nodaba oluphathelene nomhlaba sezicasule iqembu Inkatha Freedom Party (IFP). USihlalo kazwelonke we-IFP uMnu uBlessed Gwala uthi lezi zinkulumo zikaMalema mayelana nodaba lomhlaba kungukudelela kanye nokudicilela phansi iSILO noZulu wonkana.
UMalema usezwakale kaningana ephawula esidlangalaleni lapho eshiya khona angalazi ngeMbube mayelana nodaba lomhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust Board. Ngesikhathi uMalema ekhuluma nabezindaba ngesonto eledlule, walibeka ngembaba elokuthi yena akasabi muntu ngisho ISILO imbala kepha wesaba uNkulunkulu kuphela. Waphinde wathi kumele wemukwe umhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust.
Izinkulumo ezifuze lezi eseziholele ekutheni i-IFP ibona kumele anqandwe uMalema ukuze kuvimbelwe ukubhebhetheka kothuthuva.
Udaba lomhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust seluthathe elinye igxathu kamuva nje kulandela ukuba ithimba lasePhalamende eliliholwa ngowayenguMengameli uMnu uKgalema Motlanthe elibizwa ngeHigh Level Panel linqume ukuthi uZulu amukwe umhlaba ongaphansi kwe-Ingonyama Trust. Emuva kokuba kuphume lombiko, kwavungama uZulu wonkana kanye nezinye izizwe ezalibeka ngembaba elokuthi azihambisani nhlobo nalokhu futhi zikubona njengendelelo enkulu ebhekiswe kwiNgonyama.
ISILO sibe sesihlaba ikhwelo kuZulu ukuba usukume uzithathe uvikele umhlaba wawo ngoba yiwo kuphela osusele nawo.
I-IFP ithi kumele iSILO sivikelwe kosomathuba abafana noMalema. UGwala ukhale ngokuthi uMalema udlala ngegeja kuziliwe odabeni lomhlaba ngoba lolu akulona udaba lokudlala ipolitiki eshibhile kepha udaba olubucayi kakhulu.
Uphinde waphawula mayelana nodaba lwenkomo eyanikelwa nguMalema kuNgangezwe lakhe nathi ukhuluma sengathi iSILO sasiyicelile lenkomo kanti uye nje owazinikelela ngayo ngokuthanda kwakhe.
“Ngesikhathi uMalema enikezela ngale nkomo sakuthatha njengokuthi uhlonipha ISILO njengomholi. Inkulumo yakhe ayethula mhla ethula umkhankaso wokhetho weqembu lakhe yayikhombisa ukuthi ukuthengela kwakhe ISILO inkomo kumnikeza igunya lokuba akhwele adilike kuso”, kusho uGwala.
Uphinde wadalula ukuthi njengoba izwe libhekene nalolu daba olubucayi kangaka lomhlaba, kubalulekile ukuthi abaholi bamaqembu ezepolitiki bacophelele uma bekhuluma ngalo ukuze bangadukisi abantu.
“I-IFP kusegazini kuyo ukuthi yakhe kunokuba ibhidlize ngakho nanoma ngubani ozama ukuthikameza lokho siyobhekana naye ngqo”, kuphetha uGwala.
UMasipala usengcupheni yokuguqa